Daawo:- Musharax Farmaajo oo kulan la qaatay xildhibaanada laga soo doortay Puntland | HOYGA WARARKA CAALAMKA
Muqdisho:- Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo Musharax Madaxwayne ayaa maanta la kulmay Xildhibaannada labada aqal ee laga soo doortay Puntland, waxaana uu Farmaajo goobta kusoo bandhigay barnaamijkiisa siyaasadeed iyo qorshaha uu rabo in uu ku hoggaamiyo dalka Soomaaliya.
Musharax Madaxwayne Farmaajo ayaa waxa uu ku dheeraaday ka sheekeynta waxyaabaha uu ka qabanayo arrimaha amniga dalka, koboca dhaqaalaha, adeegyada bulshada, dowlad-wanaagga, dimuqraadiyadda, xaquuqul-insaanka, ku dhaqanka Dastuurka, xiriirka beesha caalamka, iyo hirgalinta nidaamka federaalka Soomaaliya.
“Waxaan aaminsanahay in barnaamijkeyga siyaasadeed uu wax badan ka qaban karo hagaajinta dowladnimada Soomaaliya.
Sidoo kale, xildhibaannada Puntland oo ka hadlay goobta ayaa soo dhaweeyay ololaha Musharax Maxamed C/llaahi Farmaajo iyagoo ku amaanay doorkii uu kasoo qaatay xasilinta Soomaaliya mudadii koobneyd ee uu ahaa ra’iisul Wasaarihii dowladdii kumeel gaarka ahayd.
Musaharrax Madaxwayne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu magaaladan muqdisho kawadaa Ololaha Doorashadiisa, waxaana lagu wadaa inmaalmaha dhow oo la kulmo xildhibaanada laga soo doortay maamulada Galmudug, Hirshabelle, Koonfur Galbeed, Banaadir iyo Gobollada Waqooyi ee Somaliland.
Halkaan ka Daawo Sawirada::::::::